ကိုဩဒိနိတ်: 48°N 68°E﻿ / ﻿48°N 68°E﻿ / 48; 68
Қазақстан Республикасы (ကာဇက်)
နိုင်ငံတော် သီချင်း: Menıñ Qazaqstanym
ကာဇက်စတန်နိုင်ငံ၏ တည်နေရာ (အစိမ်းရောင်)
ပြည်ထောင်စု တစ်ပါတီကြီးစိုး သမ္မတစနစ်နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံသမ္မတနိုင်ငံစနစ်
• ကာဇက် ခါကာနိတ်
• အာလက်ရှ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ
၁၉၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက်
၁၉၂၀ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂၆ ရက်
၁၉၂၅ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၉ ရက်
• ကာဇက် ဆိုဗီယက်သမ္မတ
၁၉၃၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်
• အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်အဖြစ် ကြေညာခဲ့
၁၉၉၀ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်
• ကာဇက်စတန်သမ္မတနိုင်ငံအဖြစ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့
• ဆိုဗီယက်ယူနီယံမှ လွတ်လပ်ရေးကြေညာခဲ့
၁၉၉၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်
၁၉၉၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်
၁၉၉၂ ခုနှစ် မတ်လ ၂ ရက်
၁၉၉၅ ခုနှစ် ဩဂုတ် ၃၀ ရက်
၂,၇၂၄,၉၀၀ km2 (၁,၀၅၂,၁၀၀ sq mi) (အဆင့်: ၉)
၁၈,၇၁၁,၅၆၀ (အဆင့် - ၆၄)
၇/km2 (၁၈.၁/sq mi) (အဆင့် - ၂၃၆)
$569.813 billion (အဆင့် - ၄၁t)
$၃၀,၁၇၈ (အဆင့် - ၅၃)
$၁၇၉.၃၃၂ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၅၅)
$၉,၆၈၆ (အဆင့် - ၆၉)
အလွန်မြင့် · ၅၁
ထန်ဂီ (₸) (KZT)
အနောက် / အရှေ့ (UTC+5 / +6)
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှာ ရုရှားနိုင်ငံ၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံ၊ ဥဇဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံနှင့် တာ့ခ်မင်နစ္စတန်နိုင်ငံများ ဖြစ်သည်။ ကက်စပီယန်ပင်လယ်နှင့်လည်း ထိစပ်နေသည်။ မြို့တော်မှာ အက်စ်တာနာ ဖြစ်သည်။ ယခင်မြို့တော်ဖြစ်သော အာမာတီမြို့ မှ ၁၉၉၇ခုနှစ်တွင် ပြောင်းရွှေ့သည်။
၁၉၉၁ခုနှစ်၊ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲချိန်တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိသည်။ လက်ရှိသမ္မတဖြစ်သူ နျူဆူလ်တန် နာဇာဘာယာဗ့် သည် ၁၉၉၁ခုနှစ်ကတည်း ကပင် တိုင်းပြည်၏ခေါင်းဆောင် ဖြစ်နေသည်။
နျူဆူလ်တန် နာဇာဘာယာဗ့် (ကာဇက်စတန်နိုင်ငံ၏ သမ္မတ)
↑ Apart from Kazakh, Russian has equal official status for all levels of administrative and institutional purposes.
↑ ကာဇက်ဘာသာစကား(၂၀၂၅ ခုနှစ်ထိ)နှင့် ရုရှားဘာသာစကားအတွက် ရုံးသုံးအက္ခရာ
↑ ကာဇက်ဘာသာစကား(၂၀၂၅ ခုနှစ်မှ)အတွက် ရုံးသုံးအက္ခရာ
↑ "Constitution of the Republic of Kazakhstan" Archived 14 July 2014 at the Wayback Machine.. zan.kz.
↑ Численность населения Республики Казахстан по отдельным этносам на начало 2020 года။
↑ Schneider၊ Johann F.; Larsen၊ Knud S.; Krumov၊ Krum; Vazow၊ Grigorii (2013)။ Advances in International Psychology: Research Approaches and Personal Dispositions, Socialization Processes and Organizational Behavior (အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်)။ Kassel university press GmbH။ p. 164။ ISBN 978-3-86219-454-4။ 27 February 2018 တွင် မူရင်းမှ မော်ကွန်းတင်ပြီး ။
↑ Kazakhstan . CIA World Factbook.
↑ ၆.၀ ၆.၁ ၆.၂ ၆.၃ World Economic Outlook Database, October 2019။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့။
↑ Human Development Report 2020 (in en)။ ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ် (December 15, 2020)။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကာဇက်စတန်နိုင်ငံ&oldid=701200" မှ ရယူရန်
ကာဇက်ဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
ဤစာမျက်နှာကို ၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၂:၃၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။